I-Perch, indawo encinci yokuzikhupha kwezithandani 💗 - I-Airbnb
I-Perch, indawo encinci yokuzikhupha kwezithandani 💗
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguAmber
Ithe ngcu kwindawo ejonge iintaba zeConewago, eli khaya lincinci limnandi laba-2 libonelela ngesitayile, indawo yokuphumla apho unokucotha khona iintsuku ezimbalwa nomntu omthandayo. Wonwabile kwi-hammock enencwadi entle, uchithe imini echibini kunye neekayak zethu ezimbini ezithandekayo, i-marshmallows eyosiweyo phezu komlilo, rhabula iwayini kumboniso weefinyi, uhlale kwizitulo ezishukumayo ukuze ujonge iinkwenkwezi, kwaye uvuke wonwabile 😊
Indlu yonke ebanzi, egcwele ukukhanya, epholileyo, enendawo yokupaka eyahlukileyo kwindawo yethu entle yeehektare ezili-10, kumgama wokuhamba wePinchot State Parkichibi! I-5m ukusuka kwi-Ski Roundtop, ikhaya lethu linomgangatho, indawo yepikniki, i-hammock, kunye nepit yayo yomlilo w / umbono weentaba ze-Conewago ukuze ukwazi ukubukela ukuphuma kwelanga phezu kweentaba ukusuka ebhedini, bukela ixhama elidlulayo njengoko uhleli ecaleni. umlilo, kwaye ubukele ukuphuma kwenyanga ekupheleni kweentsuku. Nokuba uchitha iintsuku zakho ngaphandle kokuzihambela, okanye ngaphakathi uzigcine upholile, umbono uqinisekisiwe ukuba mhle.
4.97 · Izimvo eziyi-377
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi377
IPinchot state park inechibi elithandekayo elikhulu lokuhamba ngekayaking kunye nokubheqa.
Kukho ibala legalufa lefrisbee (sigcina iseti yeediski ukuze uzisebenzise) kunye neendlela ezininzi zokuhamba intaba kunye nepaki kunye nendawo yepikiniki.
Kukho ukuqaliswa kwesikhephe (indawo yokuxhoma isikhephe akukho 3) phakathi kwemizuzu emi-5. Kukho indawo yokungena edumileyo kwindlela yethu ngokunjalo.
Kwisitrato sethu kukho umama kunye nevenkile ye-ayisikrimu evulwa kuphela ngexesha lasehlotyeni ebizwa ngokuba yiForry's, kwaye isitalato esinye ngaphezulu yivenkile yethu esiyithandayo ye-ayisikrimu kunye nendawo yegalufa encinci--Reeser's.
I-Silver Lake Inn yi-bistro enokutya okumangalisayo ngaphakathi kwemizuzu eli-10 yokuqhuba umgama!
I-Moonlight cafe yindawo ye-BYOB enomtsalane e-Italiyane enokutya okugqwesileyo malunga nemizuzu eli-15 kwelinye icala.
Ipizza yaseSkytop izisa kwindawo yethu, ukuba ungathanda ukuhlala kuyo.
I-Ski roundtop ikwiimayile ezintlanu. Ukuba uyilungele, iHershey Park yimizuzu engama-40 kwaye amava ehlabathi letshokholethi asimahla!
Indlu encinci yonke kunye nendawo yangaphandle yeyakho yonke eneendawo zokupaka ezahlukeneyo. Indlu yethu ikwakwipropathi, ezantsi endulini nasekunene, ngokubonakalayo kodwa kumgama omalunga neemitha ezingama-500. Unokuzijonga kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho konke ngaphandle kokusibona konke, kodwa sikufutshane ukuba ufuna nantoni na!
Indlu encinci yonke kunye nendawo yangaphandle yeyakho yonke eneendawo zokupaka ezahlukeneyo. Indlu yethu ikwakwipropathi, ezantsi endulini nasekunene, ngokubonakalayo kodwa kumgam…